Bolivia: Mpiady Mpiangaly Cholitas Eny Alohan’ny Sehatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jolay 2011 18:11 GMT
Vehivavy teratany Boliviana mpiangaly 'cholita'. Sary avy amin'i catch cholita avy amin'ilay mpampiasa Flickr, funkz CCBy (CC BY 2.0).
Sara Shahriari sy Tim Clayton dia nifanampy amin'ny famokarana ity lahatsary manaraka ity mikasika an'i “Yolanda ilay resim-pitiavana”, vehivavy mpanao catch ao El Alto, izay na teo aza ny fanahian-dreniny, dia niakatra ringa ihany hiady ho an'ny zony ho tonga mihoatra noho izay heverin'ny fiarahamonina Peroviana ho” tsara sy mety” ho an'ny vehivavy.
Sombiny avy amin'ny famaritana an'ilay lahatsary:
(amin'ny teny Espaniola azo henoina ato)
Grace, izay mitoraka bilaogy ao amin'ny Pinay on the Move na Pinay mihetsika dia nandeha mba hijery ny Cholitas tany El Alto ary nanoratra mikasika azy io ao amin'ny Battle of the Skirts – Adin'ny Zipo:
Amin'ny fihetsika kinga tokoa dia efa miatrika ny ringa izy, mametraka ny tànany eo amin'ny tadibe ary mihanika eo amin'ny tadibe faharoa. Manao izany izy mba hitsambikina eo ambonin'ilay tadibe sy hanomboka hampikiraviravy ny tongony ary ny vatany sisa avy eo. Rehefa izany dia avotsony ny tadibe izay manipy azy ho eny an-tratran'ny mpifanandrina aminy. Ny vokatr'izay dia fivangongoan'ny volo sy zipo eo afovoan'ny ringa.
Vao avy nahita mihitsy ny fiantoraky ny iray tamin'ireo Mpiady mpiangaly Cholitas ao Bolivia, avy eny an-joron'ny ringa aho ary niombon-kevitra fa: “tena mikopak'elatra tanteraka tokoa ny adin'ny zipo!”
Ity lahatsary manaraka ity dia maneho mpiangaly cholita iray nibata fandresena raha nifanandrina taminà lehilahy iray mpanao catch:
Ny fijerena ireo vevhivavy mpiangaly catch ao El Alto dia nanjary, tsy hoe fotsiny fanalàna andro ho an'ireo teratany, fa koa fisarihana ho an'ireo mpizaha tany; porofo mazava be ireo lahatsary ampolony napetraka ao amin'ny Youtube manasongadina ny cholitas. Mike Powell décrit dans 91 jours en Bolivie ses réactions sur le “traitement spécial” qu’il a reçu lors de son déplacement dans l’arène :
Mike Powell manoratra ao amin'ny Bolivia for 91 days - Bolivia mandritra ny 91 andro – mikasika ny fanehoan-keviny tamin'ny nandraisany “fikarakarana hafakely” rehefa nankany amin'ilay kianja:
Tamin'ny fotoana nandraisanay ny toeranay, somary nisavoritaka ihany aho. Notarihana nankeny amin'ny “laharana'ny vahiny” izahay, ka teny dia avo telo heny amin'ny sandany ara-dàlana ny vidin'ny tapakila. Teo amin'ny manodidina ny $7, izany hoe tsy dia lafobe manao ahoana. Nefa vantany vao tafiditra tao anatin'ilay kianja izahay, dia nilazana hipetraka eny amin'ny faritra voatokana ho an'ireo “vahiny”. Tsy misy olana! Nisisika nankany amin'ny ilany izahay sy Jürgen ary nipetraka tany amin'ny faritra “ho an'ny daholobe” teo anilanà Boliviana tanora mpivady mpankafy catch, izay nanototra fanontaniana anay teny anelanelan'ny fifanandrinana teny.
Na izany aza, tsy dia nanohina loatra ny fankafizany izany:
Ny Lucha Libre dia traikefa an'ny Boliviana manokana mihitsy, ary dia amporisihanay fatratra. Tsy nisy nietreritra mihitsy izahay ny ho afa-boly tahaka izany… narary hatramin'ny ambavafoko noho ny hehy mafy lavareny. Na dia mazava loatra fa sarintsariny ihany ilay izy, ny fahitàna ireo vehivavy voapetaky ny lehilahy isaky ny mihetsika dia mety hanohina tokoa, ary dia òety hiala hanalavitra ny fampisehoana toy izany ireo mpiaro sy mpandàla ny maha-vehivavy. Saingy raha heverinao fa tsy dia mahakasika loatra ny zava-mahatsikaiky anao ny herisetra kely monja, mba jereo mihitsy io!
Sarikelin'ny mpiangaly cholitas. Sary avy amin'ilay mpampiasa Flickr, jfjwak (CC BY 2.0).